VaZuma Vokwenenzvera Gwaro reZimbabwe Richakurukurwa kuAngola
Nyamavhuvhu 12, 2011
Mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, neChishanu vakadaidza vari kutungamirira nhaurirano mumapato matatu ari muhurumende yemubatanidzwa kuSouth Africa kuti vakurukure nezvegwaro remamiriro akaita zvinhu munyika.
Gwaro iri ndiro richaturwa kuvakuru venyika dzemuSADC neChipiri kumusangano wepagore weSADC kuAngola.
VaZuma ndivo mutongi gava weSADC pagakava riri muZimbabwe. VeZanu-PF neveMDC vachiri kunetsana panyaya yegwara nehwaro hwesarudzo. VeZanu-PF vanoti vari kuda kuti sarudzo dziitwe gore rino.
Ukowo veMDC vari kuti sarudzo dziitwe gore rinouya uye vari kuda kuti nyaya yemamiriro anenge akaita zvinhu munguva yesarudzo, agadziriswe pasaite mhirizhonga. VeMDC vanoda zvakare kuti mashandiro emauto avandudzwe, boka reZimbabwe Electoral Commission rivandudzwewo, uye pauye vaongorori vesarudzo mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa.
Bato iri riri kuda zvakare kuti vakuru vemauto vataure pachena kuti vachatevedzera zvido zvevanhu nekuremekedza zvinenge zvabuda musarudzo.
Asi Zanu-PF iri kuramba kutambira zviri kudiwa kuti zviitwe neMDC.
Chipangamazano chaVaZuma, Muzvare Lindiwe Zulu, vabvuma kuti pachine zvimwe zviri kuda kugadziriswa pagwara resarudzo. Asi vatiwo havasi kuzoteerera mamwe mashoko ari kutaurwa nevanhu vasiri munhaurirano vakaita senhengo yeZanu PF, VaJonathan Moyo, avo vari kuti VaZuma vasiye basa rekuyananisa.
VaPhillan Zamchiya vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachiita zvidzidzo zvepamusoro soro munyaya dzebudiriro. VaZamchiya vanoti chave kutoda kutaurwa inyaya yekuti VaMugabe vanzi neSADC vachiende pamudyandigere sezvo variwo vari kukanganisa zvinhu munyika.
Zvichakaro, nhengo shanu dzesangano rakazvimirira reSADC Council of Non Governmental Organizations, pamwe nevatori venhau vaviri vekuMozambique, vambochengetedzwa panhandare yendege yemuLuanda ndokuzodzingwa munyika iyi.
Sangano iri range richishora SADC nekusiya vamwe vatungamiri venyika vanosanganisira Angola yacho neZimbabwe, vachityora kodzero dzevanhu.
Vamwe vange vachifanira kuenda kuAngola neChishanu vabva vatadza kuenda asi vanyora tsamba yenyunyuto kuSADC vachiti sangano iri riri kuvabata neseri kweruoko.
Vanoongorora zvematongerwo enyika, Muzvare Gladys Hlatshwayo, vanoti zvaitwa neAngola zvinonyadzisa.
Hurukuro naMuzvare Gladya Hlatshwayo